"ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၀၀၊ ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၁၉၀ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၁ လ
၁၂:၁၁၊ ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၀၀၊ ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (Formatting လုပ်သည်)
[[File:University of Medicine 1.jpg|thumb|ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ သထုံလမ်း]]
'''ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်''' သည် [[မြန်မာနိုင်ငံ]]ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် ၅ ခုအနက် ပထမဦးဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အမှတ်မြင့်ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ဦးရေ ၆၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့်ကို လက်ခံသင်ကြားပေးသည်။ [[ဆေးပညာဘွဲ့]] (M.B.B.S.[[:en:Bachelor_of_Medicine,_Bachelor_of_Surgery|MBBS]]) အပ်နှင်းသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်တွင် [[တက္ကသိုလ်]] ပရဝုဏ် ၃ ခုရှိသည်။ [[လမ်းမတော်မြို့နယ်|လမ်းမတော်]]တွင်တစ်ခု၊ [[ပြည်လမ်း]]တွင်တစ်ခု (လိပ်ခုံးကျောင်း ဟူ၍လည်း သိကြသည်)၊ သထုံလမ်းတွင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လမ်းမတော်ဆေးကျောင်းမှာ [[ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး]] (Yangon General Hospital)၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး (ဂျပန်ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဂျကာဆေးရုံဂျကာ (JICA) ဆေးရုံ ဟုလည်း အမည်တွင်သည်)တို့ အနီးတွင်ရှိသည်။ လိပ်ခုံးကျောင်းမှာ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာန အနီးတွင်ရှိပါသည်။
လက်ရှိ ပါမောက္ခချုပ်မှာ[[ပါမောက္ခချုပ်]]မှာ [[ဇော်ဝေစိုး၊ ဒေါက်တာ|ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး]] ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (စီမံ)မှာ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ငြိမ်း နှင့် လက်ရှိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး)မှာ ဒေါက်တာခင်မာမြင့် ဖြစ်သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်သည် [[:en:Educational_Commission_for_Foreign_Medical_Graduates|Educational Commission for Foreign Medical Graduates]] က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၅ ကျောင်းအနက် တစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
#၁၉၆၄-၁၉၇၀: [[သီရိပျံချီ]] ပါမောက္ခ ဦးဘသန်း
#၁၉၇၁-၁၉၇၂: ဒေါက်တာ ဦးဖေကျင်▼
! ကာလ !! အမည်
#၁၉၇၂-၁၉၈၄: ဒေါက်တာ ဦးထွန်းမင်း▼
#၁၉၈၄-၁၉၈၇: ပါမောက္ခ ဦးလှမြင့်
#၁၉၈၇|၁၉၆၄-၁၉၈၈:၁၉၇၀ ||[[သီရိပျံချီ]] ပါမောက္ခ ဦးတင်အောင်စိုးဦးဘသန်း
#၁၉၈၈-၁၉၉၁: ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်စိန်
▲#|၁၉၇၁-၁၉၇၂: ||ဒေါက်တာ ဦးဖေကျင်
#၁၉၉၁-၁၉၉၆: ပါမောက္ခ ဦးမြဦး▼
#၁၉၉၆-၁၉၉၇: ပါမောက္ခ ဦးကျော်မြင့်ထွန်း▼
▲#|၁၉၇၂-၁၉၈၄: ||ဒေါက်တာ ဦးထွန်းမင်း
#၁၉၉၇-၁၉၉၈: ပါမောက္ခ ဦး[[ကျော်မြင့်]]▼
#၁၉၉၈-၂၀၀၇: ပါမောက္ခ ဦးမျိုးမြင့်▼
#၂၀၀၇|၁၉၈၄-၂၀၀၉:၁၉၈၇ ||ပါမောက္ခ ဦး[[အေးမောင်ဟန်]]ဦးလှမြင့်
#၂၀၀၉-၂၀၁၁: ပါမောက္ခ ဦး[[ဖေသက်ခင်]]▼
#၂၀၁၁|၁၉၈၇-၂၀၁၃:၁၉၈၈ ||ပါမောက္ခ ဦးသန်းချိုဦးတင်အောင်စိုး
#၂၀၁၃-၂၀၁၅: ပါမောက္ခ ဦးသက်ခိုင်ဝင်း▼
#၂၀၁၅|၁၉၈၈-လက်ရှိ:၁၉၉၁ ||ပါမောက္ခ ဦးဇော်ဝေစိုးဦးမောင်မောင်စိန်
▲#|၁၉၉၁-၁၉၉၆: ||ပါမောက္ခ ဦးမြဦး
▲#|၁၉၉၆-၁၉၉၇: ||ပါမောက္ခ ဦးကျော်မြင့်ထွန်း
▲#|၁၉၉၇-၁၉၉၈: ||ပါမောက္ခ ဦး[[ကျော်မြင့်]]
▲#|၁၉၉၈-၂၀၀၇: ||ပါမောက္ခ ဦးမျိုးမြင့်
|၂၀၀၇-၂၀၀၉ ||ပါမောက္ခ ဦး[[အေးမောင်ဟန်]]
▲#|၂၀၀၉-၂၀၁၁: ||ပါမောက္ခ ဦး[[ဖေသက်ခင်]]
|၂၀၁၁-၂၀၁၃ ||ပါမောက္ခ ဦးသန်းချို
▲#|၂၀၁၃-၂၀၁၅: ||ပါမောက္ခ ဦးသက်ခိုင်ဝင်းဦး[[သက်ခိုင်ဝင်း]]
|၂၀၁၅-လက်ရှိ ||ပါမောက္ခ ဦးဇော်ဝေစိုး
! ပညာသင်နှစ် !! အချိန်ကာလ
|ပထမနှစ် || ၁ နှစ်
|ဒုတိယနှစ်|| ၁ နှစ်ခွဲ
|တတိယနှစ် || ၁ နှစ်
|စတုတ္ထနှစ် || ၁ နှစ်
|ပဉ္စမနှစ် || ၁ နှစ်ခွဲ
|အလုပ်သင်ဆရာဝန် || ၁ နှစ်
|ပညာသင်နှစ်စုစုပေါင်း || ၇ နှစ်
*[[ရောဂါဗေဒ]] နှင့် [[သွေးပညာ]]
သင်ကြားရေး ဆေးရုံများတွင် ဆေးပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာ၊ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွားနှင့် မီးယပ်ရောဂါကုပညာများနှင့် ပတ်သက်သော သင်ကြားပို့ချချက်များကို နားထောင်ပြီး လူနာဆောင်များနှင့် ဆေးခန်းများတွင် လေ့လာသင်ယူရသည်။ မြို့ပြကျန်းမာရေးဌာနများသို့လည်း ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာဘာသာရပ်အတွက် သွားရောက်လေ့လာရသည်။
====နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) အမ်ဘီဘီအက်စ်====
|သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆေးပညာ|| ၃ လ
|ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာခွဲစိတ်ကုပညာ(ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆေးပညာ အပါအဝင်) || ၃ လ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/617667" မှ ရယူရန်